I-Cod au gratin ene-aioli, isitya esityebileyo se-cod. | Ukupheka kweKhitshi
I-Cod gratin ene-aioli
UMontse Morote | | idelicatessen, Amangenelo ashushu, Iiresiphi zokupheka
I-Cod gratin ene-aioli , Iresiphi ebalaseleyo, kum isitya esingaqhelekanga, ndiyayithanda. Kukhatshwa zezinye iitapile zokubhaka.
Kwiresiphi ndilungiselela iitapile kwi-microwave ukugcina ixesha, kodwa ungazenza kwi-oveni okanye epanini, ukuthanda kwakho, kuya kuthatha ixesha elininzi.
Ikhowudi ineendlela ezininzi zokupheka esingade sidinwe kukuzitya. Ngeli xesha ndikushiyela indlela yokulungisa i-cod gratin nge-aioli, isitya esihle kakhulu nesilula ukusilungisa.
Uhlobo lweRipeipe: sibini
Ixesha lokupheka: 50 m
Ixesha elipheleleyo: 1 h 5 imiz
Iziqwenga ezi-8 zekhowudi edibeneyo
4-5 amacephe omgubo
Iglasi yeoyile yeoli
1-2 i-clove yegalikhi
Iglasi yeoyile kajongilanga
Ukwenza iresiphi yekhowudi gratin ene-aioli, siza kuqala silungiselele zonke izithako. Siza kuba nekhowudi esele ichithiwe.
Sithatha ikhowudi edibeneyo, siyomisa kakuhle ngephepha lekhitshi.
Sibeka umgubo epleyitini, siya kuzinxiba iziqwenga zekhowudi.
Sifaka ipani ngeoyile eninzi yomnquma, xa kushushu siyayiqhotsa ikhowudi. Siza kuba nayo imizuzu engama-2-3 kwicala ngalinye.
Sithatha kwaye sigcina. Chuba kwaye usike iitapile ngokucokisekileyo, uzibeke kwisitya esikhuselekileyo se-microwave, nge-drizzle yeoyile yomnquma kunye netyuwa encinci. Siyayivuselela, siyigubungele kwaye sipheke nge-800 W imizuzu esi-8, ukuba xa siyikhupha ayithambanga ncam, siza kuyibeka eminye imizuzu embalwa de ithambe.
Xa iitapile zikhona, sizibeka kwisitya sokubhaka esigubungele amazantsi onke, ngaphezulu siza kubeka iziqwenga zekhowudi.
Silungiselela i-aioli, kwiglasi yokuxuba sibeka i-jet elungileyo yeoyile kajongilanga, igalikhi egayiweyo, iqanda lonke kunye nentwana yetyuwa. Sibetha de kwenziwa i-aioli, igalela ioyile kancinci kancinci kwaye siyingcamla de ibe kukuthanda kwethu.
Siza kubeka iipunipoli ezimbalwa ze-aioli ngaphezulu kwento nganye yekhowudi, unokugubungela nayo yonke into ukuba uyathanda.
Sifaka kwi-oveni kwaye siya gratin kangangemizuzu engama-2-3 okanye de i-aioli ibe yegolide. Ungayishiyi ehovini ixesha elide, kwakamsinya nje ukuba imdaka ngegolide kufuneka uyisuse
Ndikulungele ukutya !!!
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » idelicatessen » I-Cod gratin ene-aioli
Isonka saseFransi kunye neorenji
Iiglasi zekhompyuter kunye noshizi otyakatyiweyo